Sisal ဖိုင်ဘာထုတ်ယူစက်ကို sisal မှအမျှင်အမျိုးမျိုးကိုဖယ်ရှားရန်အသုံးပြုသည်,ရေမီ, ဂွ, af,လျှော်,ငှက်ပျောပင်,နာနတ်သီးအရွက်များ။ ဤဆီဆာထုတ်ယူစက်သည်လုံခြုံမှုကိုသေချာစေသည်,သန့်ရှင်းသောပိုက်ဆန်ကွဲများကိုချိုးဖဲ့ခြင်းနှင့်မပိတ်ပါစေနှင့်။ flax fiber.Jute extractor စက်သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစွာအလုပ်လုပ်သည်, ရိုးရာလက်စွဲစာအုပ်အလုပ်ကိုကျော်လွှား. အလုပ်သမားနှင့်အချိန်ချွေတာ,တန်ဖိုးနည်းပေမယ့်အရည်အသွေးမြင့် fiber.It ရဲ့ဖိုင်ဘာအပြောင်းအလဲနဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်ပိုမိုနှစ်သက် peeling စက်ထုတ်လုပ်ရန်.
Jute ဖိုင်ဘာထုတ်စက်ကိုအဓိကအားဖြင့်ဘောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, စည်ဓါးသွား, ပုံသေဓါး, ပါးစပ်အစာစားခြင်း, ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအဖုံး,မော်တာ,roller အစာကျွေး,Conceral etc.our sisal ဖိုင်ဘာထုတ်ယူစက်ကိုလျှပ်စစ်မော်တာနှင့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည်။, အထူးသဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်လပ်မှု.
Sisal ဖိုင်ဘာသည်အမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောအရေးကြီးသောကုန်ကြမ်းဖြစ်သည်,ထိုကဲ့သို့သောအိမ်ထောင့်အဖြစ်, စက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ,ကြိုး, ကြိုးများနှင့်အမျိုးမျိုးသောဆောင်းပါးများ, စျေးဝယ်အိတ်လို, coaster မြို့ရိုးအကြိုးကွင်း, အိုးကြိုးကွင်း, စားပွဲဖျာများ, နှင့်များစွာသောအခြား goods.In ဟောင်းရက်ပေါင်း ,sisal ဖိုင်ဘာထုတ်ယူခြင်းသည်အကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်မှုနိမ့်ကျရုံသာမကကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရုံဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းတောင်သူတွေရဲ့လုပ်ငန်းပမာဏကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ပေးခဲ့တယ်။ ဂျွိုက်ဖိုင်ဘာအခွံစက်ကိုအသုံးပြုခြင်းကထုတ်လုပ်မှုကိုများစွာတိုးစေပြီးလယ်သမားတွေအတွက်အလုပ်ကိုလည်းလျှော့ချပေးနိုင်တယ်။. sisal ဖိုင်ဘာထုတ်ယူစက်တွင်ဖိုင်ဘာထုတ်ယူခြင်းသည်လက်စွဲဖိုင်ဘာထုတ်ယူမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုမြင့်မားသည်.
ဗစ်တိုးရီးယားစက်ယန္တရားသည် sisal ဖိုင်ဘာထုတ်စက်အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ပေးပါသည်. ဗစ်တာအမှတ်တံဆိပ် sisal ထုတ်ယူစက်ကိုအမေရိကသို့တင်ပို့ပြီးပါပြီ, ဂျပန်, အီကွေဒေါ, ရဝမ်ဒါ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ကင်ညာ, ယူဂန်ဒါ, ဘူတန်, ကြက်ဆင်, အီဂျစ်စသည်တို့.
sisal ဖိုင်ဘာထုတ်ယူစက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters များကို
150M2 / နာရီ
1000-1200r / မိနစ်